တရားသူကြီး၏ဆုတောင်းချက် ? မူရင်းကက်သလစ်နှင့်လူသားအတွက်
ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင် ပဌနာ ၎င်းတို့သည်မည်သည့်အနုပညာကိုမဆိုမရောက်ရှိနိုင်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သောအချည်းနှီးသောစကားလုံးများသာဖြစ်သည်။
မစ္စတာ ယေရှုခရစ် သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေ၊ အစ်ကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တရားသူကြီးဖြစ်သည်။
ခရစ်ယာန်များစွာသည်နေ့စဉ်ဤဆုတောင်းခြင်းကိုပြုလုပ်ကြပြီးနေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်နေသောမကောင်းမှုများကြောင့်အိမ်မှထွက်ခွာခြင်းသည်ကောင်း၏ တရားသူကြီး၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူ ကျွန်တော်တို့တစ် ဦး ချင်းစီအကြောင်း။
နေ့စဉ်ခရီးကိုမစတင်မီမိသားစုတစ်စုလုံးနှင့်အတူနံနက်စာစားချိန်၌ဆုတောင်းပါ ဒါဟာအလွန်ကောင်းသောစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ် မိသားစုအတွင်းစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုခြင်း၊ နှစ် ဦး သုံး ဦး သဘောတူပြီးယေရှုကိုယ်စားခမည်းတော်ထံတောင်းခံပါက Die soque ၏စကားများကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းအားဖြင့်ကောင်းကင်မှအသနားခံချက်များကိုသူပေးလိမ့်မည်။
ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုထာဝရနှစ်သက်မြတ်နိုးသူ၊ အမှောင်မိုက်ဆုံးလမ်းများကိုထွန်းလင်းစေသောဝိညာဉ်ရေးရာအလင်း၊ အသက်တာ၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်နက်ရှိုင်းသောချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွေးမွေးသောသွန်သင်ခြင်းနှင့်သက်သေခံခြင်း။
သန့်ရှင်းစင်ကြယ်။ စိတ်နှိမ့်ချသောအားဖြင့်အမြင့်ဆုံးသောအပြစ်ဒဏ်ကိုခံထိုက်ပေ၏။ ဘုရင်တို့၏ဘုရင်ဖြစ်တော်မူသောကိုယ်တော်သည်ခပ်သိမ်းသောသတ္တဝါအပေါင်းတို့ကိုအုပ်စိုး။ အစိုးရသောမင်းဖြစ်သူ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက်အရာခပ်သိမ်းကိုပေးသနားတော်မူပါ။
နတ်ဆိုးများနှင့်နတ်ဆိုးများသည်သင်၏ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ထွက်ပြေးလာကြသည်။ ဖျားနာသူများကိုသူတို့၏အိပ်ရာပေါ်မှထစေခဲ့သည်။ မျက်မမြင်များကိုသူတို့၏မျက်စိကန်းစေခြင်းမှကုသပေးခဲ့သည်။ နူနာရောဂါများကိုကျန်းမာစေပြီးသင်နှင့်နောက်လိုက်သူများအားအသက်နှင့်မုန့်ကိုပေးခဲ့သည်။
လူအုပ်ကိုပေးဖို့ငါးနဲ့မုန့်တွေကိုများများပွားခဲ့တယ်။ ရေတွေဖွင့်ပြီးသူတို့ကိုဖြတ်လျှောက်သွားခဲ့တယ်၊ နေ့ရောညပါပေးခဲ့တယ်၊ ငြိမ်သက်မှုနဲ့သဟဇာတဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငါတို့တရားမျှတတဲ့တရားသူကြီးမင်းရဲ့လူတွေနဲ့အတူလိုက်ပါ။ သစ္စာမရှိသူ၊ သင်လာသောအခါအရှက်မကွဲ၊ သစ္စာပျက်ခြင်း၊ အငြိုးမထား၊ မညှဉ်းဆဲ၊ ပုံဥပမာများဖြင့်သွန်သင်ခြင်း၊ ထာဝရအမွေခံထားခြင်း၊ သန့်ရှင်းသောကျမ်းစာ၌ထာဝရအမွေခံခြင်း၊ သင်၏ဆုတောင်းခြင်းကိုနားထောင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာသာပေးခြင်းကိုခံခြင်း။
ဆုတောင်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တောင်းဆိုမှုများအပြင်ကမ္ဘာကြီးကိုနေ့စဉ်ကျွန်ုပ်တို့အားနှင့်မိသားစု ၀ င်များအားကာကွယ်ပေးသောဘုရားသခင်အားကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းခြင်းကိုမြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကက်သလစ်ချာ့ချ်သည်တရားမျှတသောတရားသူကြီးထံဆုတောင်းရန်စံပြရှိသည်။ ဤဥပမာဆုတောင်းချက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေရှုခရစ်၏ဂုဏ်အင်္ဂါရပ်အားလုံးကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြင့်စတင်သည်။ ထို့နောက်ရရှိသောမျက်နှာသာကိုကျေးဇူးတင်ခြင်းအားဖြင့်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်အဆုံးသတ်ခြင်းအားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်း၏လုပ်ရပ်အဖြစ်ယုံကြည်သည်။ အဆိုပါအံ့ဖွယ်ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။
ငါ့ကိုတိုက်ခိုက်သောသားရဲများ၊ ငါ့ကိုဟောက်သောခြင်္သေ့၊ ဘေးဥပဒ်ရောက်သောအခါငါကြောက်။ တုန်လှုပ်၏။ ငါလမ်းလျှောက်လို့မရတော့ဘူး၊ မတရားမှုကိုကြောက်တယ်၊
တရားသူကြီးသာလာ၊ ငါ့ထံသို့မြန်မြန်လာ၊ မကောင်းမှုအားလုံးကိုဖယ်ရှားပါ။
ငါအော်ဟစ်ပြီးမင်းရဲ့ဘဝကိုမင်းရှာနေတယ်၊ ​​ငါဟာမခိုင်မြဲတဲ့လူတစ်ယောက်။ မင်းကိုရှာတယ်၊ မင်းကိုမတွေ့နိုင်၊ လာပါ၊ ငါချစ်ရာသခင်လာပါ။
နတ်ဝိဇ္ဇာအတတ်နှင့်မကောင်းမှု၊ မာရ်နတ်နှင့်အပြစ်ပြုသူ၊ ဦး ခေါင်းကို တင်၍ ငါ့ဘက်မှဝေးရာသို့ထွက်သွားပါ၊ ချက်ချင်းဆုတ်ခွာပါ။ တရားသူကြီးသာကျွန်ုပ်၏အကူအညီကိုယူပါရစေ။
ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုသည်ရောက်လာပြီ။ အမျိုးသားများသည်သင်၏သန့်ရှင်းသောနာမတော်ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုကြသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏တရားမျှတသောတရားသူကြီးကိုပေးသည်။ ထာဝရကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဟာလေလုယ၊ အာမင်။
ကိုယ်ကျိုးရှာခြင်းမရှိဘဲ ၀ ိညာဉ်တော်မှပြုလုပ်သောယုံကြည်ခြင်း၏ကောင်းသောပြည့် ၀ သောဆုတောင်းခြင်းထက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုအဆုံးသတ်ရန်ပိုကောင်းသည်။
သူသည်သင့်အတွင်း၌တည်ရှိပြီးသူသည်သင့်အားအမြဲတမ်းသင့်နှင့်အတူလိုက်ပါ။ သင်၌ ၀ ိညာဉ်ရေးတည်ရှိမှုကိုငါတောင်းပန်ပြီးသင့်ကိုလွှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုသည်၊ သက်ရှိသတ္တဝါအားလုံးသည်သြတ္တပ္ပစိတ်ပိုင်ခွင့်နှင့်လိုက်ဖက်သောလွတ်လပ်မှုဖြစ်သည်။
ငါနှင့်အဘယ်သူမျှလူသည်ငါ့ထံသို့မချဉ်းကပ်နိုင်။ သင့်ကိုချမ်းသာစေခြင်းငှါ၎င်း၊ ဘုရားနှင့်သင်၏အိမ်နီးချင်း၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတံခါးဖွင့်ခြင်းငှါ၎င်း၊ တံခါးပွင့်လျက်ရှိသည်။ ထာဝရ။
ဤဆိုးရွားလှသည့်အခိုက်အတန့်ကိုမိသားစု ၀ င်တစ် ဦး သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတစ် ဦး နှင့်နေထိုင်ခြင်းသည်သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်အဆိုးဆုံးအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။
တရားမျှတသောတရားသူကြီးယေရှုခရစ်အားအပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန်၊ နားလည်မှုများဖွင့်ရန်နှင့် တရားမျှတမှု.
ထိုနည်းတူစွာ၊ ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးချင်းကိုတောင်းပန်ပါ၊ ငြိမ်သက်မှုအနည်းငယ်တောင်းခံရန်တောင်းခံနိုင်သည်။
အသက်ရှင်သောသူများနှင့်သေလွန်သူများ၏ထာဝရတရားမျှတသောတရားသူကြီးဖြစ်သောထာဝရတရားမျှတမှုရှိသောနေသည်လူသားအနွယ်၏ကျန်းမာရေးအတွက်အပျိုစင်မာရိ၏ ၀ မ်းဗိုက်ထဲ၌ပါဝင်သည်။
Just Judge, ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသော၊ ကျွန်ုပ်၏ချစ်ခြင်းအတွက်လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံတော်မူသည်။
နက်ဖြန်နေ့၌ထ။ သင်္ချိုင်းတွင်း၌ထားကြ၏။ သေခြင်း နှင့်ငရဲကနေ။ တရားမျှတမှုနှင့်ဘုရားသခင့်တရားသူကြီး၊ ကျွန်ုပ်၏တောင်းပန်ချက်များကိုနားထောင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏တောင်းဆိုချက်များကိုတက်ရောက်ပါ၊
သင်၏အသံ၏အင်ပါယာသည်နတ်ဆိုးများကိုထွက်ပြေးစေပြီးနတ်ဝင်သူများ၏အလောင်းများကိုစွန့်ခွာစေသည်။ မျက်မမြင်များကိုမျက်စိမြင်စေ။ စကားမပြောတတ်၊ နားမကြားသူများအားကြားနာကာမက်ဒလင်းနှင့်လေဖြတ်သူများကဲ့သို့သောအပြစ်သားများကိုခွင့်လွှတ်သည် ရေကူးကန်ကနေ။
မင်းကိုရန်သူတွေမမြင်နိုင်တော့ဘူး၊ မင်းကိုထောင်ချခဲ့တဲ့မင်းကမင်းအသံနဲ့မြေပေါ်ပြန်ကျသွားတယ်။ မင်းလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာသက်တမ်းကုန်သွားပြီ။ သင်သည်ပေတရုအားအကျဉ်းထောင်ကိုဖွင့ ်၍ ပေတရုကိုဟေရုဒ်မင်း၏အိမ်တော်၌အချုပ်မထား၊
တရားသူကြီး၊ အကျွန်ုပ်ကိုရန်သူအပေါင်းတို့လက်မှကယ်လွှတ်တော်မူပါ။ အကျွန်ုပ်ကိုဖုံးအုပ်တော်မူပါ။ သန့်ရှင်းသောအဝတ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုဖုံးအုပ်တော်မူသည် ဖြစ်၍၊ ကိုယ်တော်၏သန့်ရှင်းသောအရိပ်သည်အကျွန်ုပ်ကိုဖုံးအုပ်လျက်၊ နားမကြား၊ နားမကြား၊ လျှာသည်ငါ့ကိုမအပြစ်မတင်နှင့်၊ ငါ့ကိုညှဉ်းဆဲခြင်းငှါကြိုးစားသောအခါ၊ သင့်နှုတ်ခမ်းသည်တရားရုံး၌တိတ်ဆိတ်စွာနေလိမ့်မည်။
သခင်ယေရှုခရစ်တော်နှင့်တရားသူကြီးချုပ်ကကျွန်ုပ်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခများ၊ ဝေဒနာများ၊ ကတိက ၀ တ်များဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပေးပါ။ ကျွန်ုပ်အားသင့်ကိုတောင်းပန်ပါစေ၊ သင်၏တန်ခိုးနှင့်သန့်ရှင်းသောအသံတော်၏အင်ပါယာကိုကျွန်ုပ်အားကူညီရန်ခေါ်ပါ။ ထောင်များဖွင့်လှစ်ပါ။ ခါးစည်းတွေကျိုးနေတယ်၊ ​​ဓားတွေကကွေးနေတယ်၊ ​​ငါ့ရဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်မဆိုကျိုးပဲ့ပြီးအသုံးမကျဘူး။ မြင်းတွေကငါ့ကိုမလာကြဘူး၊ သူလျှိုတွေကလည်းငါ့ကိုမကြည့်နိုင်ဘူး။
သင်၏အသွေးသည်ကျွန်ုပ်ကိုရေချိုးပေးသည်၊ သင်၏ဝတ်လုံသည်ငါ့ကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။ သင်၏လက်သည်ငါ့ကိုကောင်းချီးပေးသည်။ သင်၏တန်ခိုးသည်ငါ့ကိုဖုံးကွယ်ထားမည်။ သင်၏လက်ဝါးကပ်တိုင်သည်ငါ့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်။ အသက်နှင့်ငါသေသည့်အချိန်တွင်ငါ၏အကွယ်အကာဖြစ်လိမ့်မည်။
သန့်ရှင်းသောသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူအ ၀ တ်အစားနှင့်ဖုံးအုပ်ပေးပါရန်တောင်းပန်ပါ၏။
ထို့ကြောင့်သူထက်ခက်ခဲသောဖြစ်စဉ်များကိုသူနားလည်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ခံစားရသည်၊ မည်သည့်အရာကိုစဉ်းစားသည်၊ ယခုအချိန်တွင်မရှင်းလင်းသေးပါကမှန်ရာကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလမ်းညွှန်ပေးသည်။
အချိန်၊ မိနစ်၊ နေ့၏ရက်၊ အချိန်ဇယားမရှိပါ။ သင်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်ဆန္ဒနှင့်ယုံကြည်ခြင်းရှိရန်ဆုတောင်းရမည်။